Karazana voaniho parthenocarpic | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Karazana voaniho parthenocarpic
Zava-baovao izany: crocodiles Parthenocarpic
Ao amin'ny tsena maoderina misy voanio voajanahary, dia mihabetsaka hatrany ny entana, izay vokatry ny vokatry ny mpamboly maoderina. Ny olona rehetra dia zatra amin'ny soratra tranainy amin'ny karazana "vary" na "hybrid". Saingy eo amin'ny fonosana sasantsasany dia mahita fehezanteny toy ny hoe "Parthenocarpic hybrid" ianao, ary tsy takatry ny olona ny dikan'io fehezanteny io.
Ampio ny tenanao: kôkômbra voaaro amin'ny tenany
Amin'izao vanim-potoana izao, maro amin'ireo mpivarotra lohataona no mitady karazana voankazo vaovao izay tsy mitaky fikarakarana manokana ary hanome vokatra tsara. Saingy mety hipoitra ny olana raha mitombo ao anaty trano famonoana ity vokatra ity. Raha ny zava-misy, karazana voankazo marobe no mitaky borosy moka, ary ahoana no hanaovana izany amin'ny toerana mihidy?
Ahoana no hananana cucumbers "Herim-po": toro-hevitra amin'ny mpamboly
Sarotra ny mahita zaridaina am-pirahalahiana izay tsy te hiditra amin'ny cucumbers. Na dia fantany aza anefa fa ny fahombiazan'ny fambolena ity zaridaina ity dia miankina amin'ny safidy mety amin'ny karazana zavamaniry. Ny famafazana eny an-kalamanjana dia tsara ho an'ny "Herim-po". Firaisan-kina "Herimpo F1": ny karazana varietal ny famaritana "courageux" dia ahitana fampahalalana izay manamarina ny karazana voninkazo.
"Zozulya" cucumber: famaritana ny karazana vary sy fambolena
Ny hasarobidin'ny kôkômbera voalohany dia ny hoe ny voankazo voaorina ao anatin'ny fotoana fohy dia tsy mangidy. Ao amin'ireo mpamboly legioma, ny karazana cucumber "Zozulya F1" dia malaza amin'ny mpamboly legioma. Tao anatin'ny 40 taona nisiany sy nitombo in-100, dia nanamarina ny fahatokisan'ny mpanjifa. Diniho ny endriky ny fambolena ao amin'ny trano fonenana sy ny zaridaina.
Ny fomba hitombo ny kôkôlà holatra "Masha f1" eny an-tsaha
Anisan'ny karazana heniheny isan-karazany, ny Holandey, ny karazana kukumerina marevaka miaraka amin'ilay anarana mahaliana "Masha f1" dia manana ny toerana ambony. Tantaran'ny famokarana Mba hahafantarana bebe kokoa momba ny karazana voankazo mahazatra vahiny "Masha f1" ary hahatakatra ny antsipiriany rehetra momba ny fambolena azy, dia tokony hijery ny famariparitany amin'ny antsipiriany.
Tombontsoa sy fitsipika amin'ny fampiroboroboana karazana varotra kolonely marina
Ankehitriny, ny karazana varim-bazaha dia tena lehibe tokoa fa ny mponin'ny lohataona fotsiny no manandratra ny masony. Misy toerana mendrika ao anatin'ity lisitra goavana ity dia voatsinjarain'ny "Colonel True" famokarana, izay manana tsiro tsara ary azo ampiasaina betsaka. Ny famaritana ny karazana "True Colonel" avy ao amin'ny "Cucumber True" dia azo lazaina fa ireo hybrides amin'ny ankapobeny dia manana fandaniana avo lenta ary manome azy ireto famaritana manaraka ireto: Ao anatin'ny 45 andro aorian'ny fipoahana ny zana-kavoana feno dia manomboka mamoa izy ireo, ary miara-mihinana ny voankazo.
Fijinjana goavam-be amin'ny tranokala kely iray: karakamin-tsakafo Tagainy
Na dia teo aza ny zava-bitan'ny vovobony Taganai dia ny mpamboly vao haingana no nahatonga azy ireo ho lasa tian'ny mpamboly sy tompona trano fonenana. Ity karazana hybride Ural ity dia tsara ho an'ny fambolena any amin'ny faritra ambanivohitra kely, satria ahafahanao manangona be dia be avy amin'ny tanety kely.
Ny kokombolo vao mihinana "Crispin F1"
Maro ny zaridaina liana amin'ny fambolena izay ahafahana mijinja aloha kokoa noho ny mahazatra. Tsy maninona raha maniry voatabia, kôkômbra na legioma hafa ianao - ny fotoam-pandrefesana na ny salam-panatanjahantenany dia ho fanoherana mavesatra iray ho an'ny karazana iray hafa. Ao amin'ity lahatsoratra ity dia hifanakalo hevitra momba ny kikumboro iray mahaliana ianao, izay ahafahanao manangona ny vokatra voalohany amin'ny fotoana fohy.
Famokarana voaloham-bokatra sy ny vokatra: singanina ny karazana varim-bazaha
Na dia eo aza ny fisian'ny karazana varimbariana betsaka indrindra, maro ireo mpikaroka no midera ny kavina Emerald, izay azo antoka fa misy fanazavana tsara. Ampahafantaro ny toetra mampiavaka ity karazany ity sy ny tombontsoany amin'ny hafa. Sary sy famaritana Ny karazana kôkômba voafantina dia maneho ny endrika ivelany, saingy ireo mpahay zokiolona za-draharaha kosa dia mihaino hatrany ny sasany.
Mandritra ny fahaterahana sy ny fiterahana: ny karazana grenades avy any Siberia
Indraindray ny haben'ny faritra ambanivohitra dia tsy mamela ny hanomezana toerana malalaka ho an'ny fandriana miaraka amin'ireo legioma malaza toy ny kôkômbra. Amin'ity tranga ity, ny mponina amin'ny fahavaratra dia afaka mamonjy ny fambolena karazana varotra avo lenta "Siberiana garland F1". Akombonan'ny hoavy: famaritana Avy amin'ny endritsin'i F1 amin'ny lohateny, mazava ho azy fa ny "garlanda F1" dia manondro karazana hybrid.
Cucumber Meringue: famaritana sy fambolena
Mba hahazoana vokatra tsara amin'ny kôkômbra, mila mandray andraikitra tompon'andraikitra amin'ny fisafidianana karazana. Samy nandoto ny tantely izy ireo ary nanala ny tenany. Anisan'izany ny karazana voankazo "Merenga". Andeha hojerentsika akaiky ny toetra sy ny teknolojia hitombo. Famaritana ny karazana cucumber "Meringue F1" dia karazana fiompiana voaloto vaovao natolotry ny mpamboly holatra.
Akora "Ecole F1": ny toetra sy ny fambolena agrotechnology
Mifidy karazana kôkômera mahazatra, matetika sarotra ny mamaritra ny fisalasalana amin'ny fahaterahana, ny fanoherana ny aretina, ny toetra tsaratsara sy ny toetoetran'ny fambolena, fambolena, fitehirizana. Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ireo fanontaniana mahaliana momba ny kôkômera Ekol F1 - iray amin'ireo mpifaninana vaovao tsara indrindra.
Cedric "Cucre": famaritana, fambolena ary fiahiana
Ny tabilao "Cedric" - ny parthenocarpic, izany hoe, tsy mitaky fibobohana, karazana karazana misokatra faramparany. Azo atao ny mampitombo azy ao anaty trano fonenana na sarimihetsika, na dia tsy voarara aza ny fambolena malalaka. Zana-tohatra matanjaka be io, fa tsy mifady hanina. Famaritana Ny karazany dia manana rafitra fakan-dàlana efa voavolavola ary mamba ny voankazo.
Akora "Kibriya f1": ny karazana sy ny fambolena agrotechnics
Ny vinavina dia lasa ampahany manan-danja amin'ny sakafo isan'andro, ireo legioma ireo dia eo an-databatra saika isan-taona. Isaky ny lohataona dia miantsena azy ireo eo am-pandriana na ao amin'ny trano fivoahana. Ny karazam-pahaizana samihafa dia mahavariana ary manontany tena ianao hoe inona no karazana tolotra omena.
Akondro "Cupid f1": ny toetra, ny fambolena ary ny fikarakarana
Matetika ny mpamboly sy ny mpamboly dia miatrika ny olan'ny kôkômbinina mifidy mba hamboly. Olona maro no tarihin'ny safidin'ny toro-hevitra amin'ny namana na maniry fotsiny ny legioma tiany. Na izany aza aloha, tokony horaisina amin'ny saina ny fahasamihafan'ny karazana any amin'ny faritra avaratry ny planina hambolena.
Akora "Spino": ny toetra, ny fambolena agrotechnics
Ny kokombolo "Spino" - vary varimbariana be dia be. Ity karazana ity dia manohitra ny tsy fahampian'ny hazavana ary natao ho an'ny fambolena ao anatin'ny roa ambiny roa amin'ny tany voaaro. Famolavolana tantaram-pamokarana Ity karazana ity dia natolotr'ireo mpihinana holandey avy amin'ny orinasa "Syngenta". Namorona zava-baovao tsara ho an'ny anana izy ireo.
Ahoana no hambolena sy hanombo cucumbers "Ny rehetra hialona"
Ny kôkômba misy anarana tsy mahazatra sy mampanantena - "Ny tsirairay amin'ny fialan-tsasatra f1" - dia karazana malaza maro amin'ny mponina amin'ny fahavaratra miaraka amin'ny traikefa isan-karazany ateraky ny fambolena. Ity hybride ity dia manana tombony maro, anisan'izany ny vokatra avo lenta. Araka ny fanadihadian'ny zaridaina za-draharaha, mahavariana ny hatsaran-tarehy ny fizotran'ny karazam-borona, ary ny isan'ny voa nambolena tena mahavariana - mandinika ny endrik'ireo komanda ireo ao amin'ilay lahatsoratra.
Ahoana no hambolena sy hanombo cucumbers "Shosh"
Ny ampongabendanitra bitika Partenocarpic dia manana tombony miavaka amin'ny karazam-pirazanana izay ampiasaintsika - tsy mila fibobohana. Mazava ho azy fa tsy mamela ireny karazana ireny ny mpamboly. Anisan'ireo kôkômbra ireo no hita tao amin'ny tsenantsika, dia niseho ny karazana "Shosh F1", izay nokarakarain'ireo mpihaza Rosiana.
Ahoana ny fomba famolavolana sy famokarana cucumbers "Paratunka"
Ny legioma mihintsy dia miseho eo amin'ny latabatra, fa ny iray amin'ireo "mpanjifa" tranainy indrindra dia kokombolo. Androany dia maro karazana samy hafa. Anisan'ireny ny zavamaniry am-bolana, eo antenatenany, faramparany, hybrid sy maso. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny "hybrid Paratunka F1" voalohany.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Karazana voaniho parthenocarpic